चुहावट १५.३२ प्रतिशतमा ओर्लियो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु. ७ अर्ब २० करोड खुद नाफा आम्दानी गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा रु. २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको प्राधिकरणले यसलाई ४ अर्ब ३० करोड अर्थात १४९ प्रतिशतले बढाएर ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो ।
विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, प्रशासनिक र वित्तीय सुधारका लागि चालिएका कदमबाट प्राधिकरण गत आवमा पनि खुद नाफा कमाउन सफल भएको हो ।
‘सरोकारवालासँगको व्यापक छलफलपछि नयाँ ऐनमार्फत प्राधिकरणलाई अझै प्रतिश्पर्धी संस्थाको रुपमा अगाडि बढाउने छौं’मन्त्री पुनले भने । ‘एक वर्षभित्र प्रणालीमा थपिने एक हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्नु हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण छ, ऊर्जाका पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्याँसजस्ता अन्य स्रोतलाई विस्थापित गर्ने लगायतका योजनाका साथ त्यो एक हजार मेगावाट विद्युत् मुलुकभित्रै खपत गर्ने वातावरण बनाउँदैछौं।’
उनले थपे,‘नेपालगंज, भैरहवाजस्ता औद्योगिक नगरमा तत्काल २ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत्को माग छ तर वितरण प्रणालीको संरचनागत समस्याका कारण दिन सकिरहेका छैनौ, खपत बढाउने र उत्पादन बचत भयो भने भारतीय तथा क्षेत्रीय विद्युत बजारमा सजिलै पढाउन सक्छौं र पढाइरहेका पनि छौं ।’
चुहावट १५.३२ प्रतिशतमा झर्‍याे
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राविधिक र गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर अभियानकै रुपमा चालिएका कदमले विद्युत चुहावट इतिहासमै कम बनाउन सफल भएको बताए ।
गत आवसम्ममा ग्रीडमा आवद्ध भइ विद्युत उपभोग गर्ने जनसंख्या करिब ७८ प्रतिशत अर्थात ४५ लाख पुगेको छ । यो आव ०७४/७५को तुलनामा करिब १० प्रतिशतले बृद्धि हो । गत आवमा ७ अर्ब ५५ करोड युनिट ऊर्जा प्रणालीमा उपलब्ध भएको थियो । प्राधिकरणको उत्पादन करिब २ अर्ब ५५ करोड, निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको २ अर्ब १९ करोड र भारतबाट २ अर्ब ८१ करोड युनिट आयात गरिएको थियो ।
प्रणालीमा प्राधिकरणको ३४, निजी क्षेत्रको २९ र आयतको ३७ हिस्सा प्रतिशत रहेको छ । भारतर्फ विद्युत निर्यात ३ करोड ४७ लाख युनिट रहेको छ। निजी क्षेत्रको विद्युत किन्नका लागि १४ अर्ब १३ करोड र आयाततर्फ २३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । ३२ करोड रुपैयाँको विद्युत निर्यात भएको छ ।
गत आवमा ७५७ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये ६०६ सर्किट किलोमिटर संचालनमा (चार्ज) आएको छ। ३३ केभी र सोभन्दा मुनिका करिब ९ हजार ७२२ सर्किट किमी वितरण लाइन निर्माण सम्पन्न भई चार्ज भएका छन् ।
प्रसारण तथा वितरण गरी ४० सबस्टेसन नयाँ विस्तार एवं स्तरोन्नति गरिएको छ । करिब ९२० एमभीए क्षमता थप भएको छ । ६ हजार ५८१ वितरण ट्रान्सफर्मर थप गरिएको छ ।
लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न नभएर रुग्ण बनेका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ र काबेली करिडोर प्रसारण लाइन सहित ३ आयोजना, वितरणतर्फ ३४ गरी ३८ आयोजना सम्पन्न भएका छन् । १३ आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरि पुनः ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
देशभरी रहेका थ्री फेज मिटर तथा टिओडी मिटरहरुलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यको थालनी भएको भएको छ । काठमाडौंबाट सिंगल फेज मिटरलाई स्मार्ट सिंगल फेज मिटरले प्रतिस्थापन गर्न प्रारम्भिक कार्य सुरु भैसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई ताररहित बनाउने अभियानअन्तर्गत भूमिगत तार विद्ध्याउन ठेकेदार छनौट भै प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसकेको छ ।